Laamaha Amniga Puntland iyo Galmudug oo howlgal wadajir ka fuliyay Gaalkacyo | Jowhar Somali news Leader
Home News Laamaha Amniga Puntland iyo Galmudug oo howlgal wadajir ka fuliyay Gaalkacyo
Laamaha Amniga Puntland iyo Galmudug oo howlgal wadajir ka fuliyay Gaalkacyo
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegaya in Ciidamada Amniga Puntland iyo Galmudug ay howlgal wadajir ah ka fuliyeen Koofurta iyo Waqooyiga magaalada oo ay kala maamulaan labada dhinac.
Howlgalkan ayaa waxaa ka qeyb galay Ciidanka Kumaandooska ee Xoogga dalka ee loo yaqaano DANAB, waxaana howlgalka ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga guud ee magaalada, lagana hortagayay falal amni daro.
Saraakiisha Laamaha Amniga ayaa sheegaya in howlagaladaas wadajirka lagu qabtay rag looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab.
Sidoo kale Saraakiisha ayaa sheegay in howlgalku sii socon doono, inta laga laga xaqiijinayo amniga magaalada Gaalkacyo oo ay horay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal.
Howlgalkan ayaa ku soo aaday, kaddib markii maalin ka hor ay Ciidamada Amniga Galmudug iyo kuwa Kumaandooska ay toogasho ku dileen nin la sheegay inuu ahaa Madaxii Al-Shabaab u qaabilsanaa Gobolka Mudug, kuna hubeysnaa bastoolad uu kula dagaalamay ciidamada, kadibna ciidamada ay toogteen.